I-Wiki njenge-Symbol Ye-Age - I-Semalt Expert Point Of View
DIGNIBIZ Domotica E Engenharia
Isazi sika-Julia Vashneva, Semalt , sithi i-Wikipedia iyinhlangano ye-encyclopedia ehlukile e-intanethi ngenxa yokuthi "ubani ongakwazi ukuhlela", inqubomgomo esebenzayo kokuqukethwe okuningi. Isimemo sabo esivulekile sokubhala nokuhlela izihloko sinikeze imiphumela emangalisa kanye nemicabango yabantu emphakathini.Kodwa, inqubomgomo yeza-eyodwa, yeza-yonke ibuye nezohwebo.
Ngokwemvelo, i-Wikipedia ayiyona nje i-encyclopedia e-intanethi kodwa futhi nomphakathi osungule i-bureaucracy. Umphakathi unezinhlaka zamandla ezichazwe kahle ezinika abavolontiya abaphathi ukuhlela ukususa okuqukethwe okungalungile nokuvikela abantu abasengozini yokulimaza.
Lezi zinyathelo zinquma ukuthi yiziphi okufakiwe okumele zikhishwe "kunoma ubani ongahlela" inqubomgomo. Ngenkathi uhlu lwama-entries anjalo lushintsha ngokushesha, okunye okuqukethwe okungabandakanyi "kunoma ngubani ongakuhlela" inqubomgomo kufaka phakathi okufakiwe okungu-82 okuvela ezihlokweni zikaKristuina Aguilera eya ku-Albert Einstein. Lezi zingeniso zivikelwe ngokungahleliwe ngenxa yokuchithwa okuphindaphindiwe nokuphikisana ngalokho okufanele kufakwe kulokho okufakiwe. Ngaphandle kokungeniswa okungu-82, kunamakholi angu-179 okuvikelwe okuyizinombolo ezibandakanya okuqukethwe ku-Adolf Hitler, uGeorge W. Bush no-Islam. Lezi zingeniso zingahle zihlelwe ngabantu ababhalisiwe kwiwebhusayithi okungenani izinsuku ezine.
Izinyathelo ezibalulwe ngenhla zingase zibonakala zingcolisa imigomo yentando yeningi yesayithi, kodwa, uJimmy Wales, umsunguli we-Wikipedia uthi ukuvikelwa kuyisilinganiso sesikhashana futhi kuthinta kuphela ingxenyana encane yezingaphezu kwezigidi ezingu-1.2 ezifakiwe kwi-English- website yezwe. Ngokusho kukaMnu. Wales, ukuvikelwa kuhloswe ukulawula ikhwalithi, kepha akuchazi i-Wikipedia. Uthi lokho okuchaza i-Wikipedia ukuhlanganyela okuvulekile kwamavolontiya.
Kusukela ekuqaleni, uMnumzane Wales wanikeza le website umsebenzi ocacile: unikeza ulwazi mahhala kunoma ubani emhlabeni. Ngesikhathi esifanayo, wabeka imithetho nemithethonqubo efana nesidingo sokwethulwa kwedatha ngombono wokungathathi hlangothi. Uhlelo lubonakala lusebenza kusukela i-Wikipedia ikwazi ukushaya amasayithi afana ne-CNN ne-Yahoo News.
Nakuba abantu abaningi becabanga ukuthi i-Wikipedia inebahlinzeki abangaba yizigidi ezingu-10, iningi lomsebenzi lenziwa ngabantu abambalwa. Abaphathi esiteshini yizo zonke izisebenzi zokuvolontiya, ikakhulukazi ezineminyaka engu-20. Zihlala zikhulumisana njalo futhi zihlanganyela nomthwalo wokuqapha izinguquko ezingadingekile noma ezinonya. Kukhona isofthiwe esenziwe ngezifiso ezibuka izinguquko ezenziwe ezihlokweni.
Mnumzane. I-Wales ibhekisela ekubhujisweni kusayithi njengenkinga encane. Kodwa-ke, kulo nyaka, umphakathi wanquma ukwethula ukuvikeleka okuyingxenye yezihloko ezithile ngenxa yomsakazo okhushukile olwazini lwamanga kuwebhusayithi. Isikhathi sokulinda izinsuku ezingu-4 senzelwe ukusebenza ngokufanayo esikhathini esibekiwe kubathengi bezibhamu.
Uma ukuhlaselwa sekufa, imodi yokuvikelwa komzimba ekhasini ishintshelwe kunoma ubani angahlela..Ngenkathi ezinye izinto ezifakwe ku-Bill Gates zivikelekile kancane ezinsukwini ezimbalwa ngoJanuwari, izihloko eziphathelene noMongameli Bush zihlala kwimodi evikelwe ngokungapheli.
Ngokusho kwabagxeki, ukuvikelwa kokungeniswa okunye kumangalela "noma ubani ongakwazi ukuhlela" inqubomgomo. UNicholas Carr, umlobi wezobuchwepheshe kanye nokuhlaselwa kanzima kwe-Wikipedia ithi isayithi liqala ukubonakala njengesakhiwo sokuhlela. Ukusho ukuthi ibutho labantu abathanda ukwenza umsebenzi omkhulu lingenza umsebenzi omuhle ngokulawulwa okuncane ukudukisa lokho i-Wikipedia imele, kusho uCarr.
Kodwa uMnu. Wales uthi ukugxekwa okunjalo akudingekile ngoba kukhona izihlungi kuwebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, abaxhasi be-Wikipedia bathi akusho ukuthatha isikhathi esiningi sokudlula.
Empeleni, iningi lezingxoxo nge-Wikipedia ngokuvamile ligxile ekunembile kwalo. Ngonyaka odlule, isihloko esivela kuyi-Nature journal sithi amaphutha e-Wikipedia ayephakeme kakhulu uma kuqhathaniswa nalawo atholakala kuyi-Encyclopedia Britannica. Izikhulu zaseBrithannica ziphikisana nale nkulumo.
Naphezu kokugxeka, i-Wikipedia ithi ukuchithwa kokuqukethwe kusayithi kukhula ngokomzimba. Ekuqaleni, konke kuhlelwe ngokungenangqondo ngama-idiots, kusho uWayne Saewyc, isisebenzi sokuzithandela se-Wikipedia. Njengoba lesi sihloko sikhula futhi sicubungula, okuqukethwe kunembile kakhulu.
Izisebenzi zokuzithandela ze-Wikipedia zivame ukuthi zizizwa zikhululekile okokuqala lapho zanikeza isayithi. U-Kathleen Walsh, oqeqeshwe ekolishi, ngokuyinhloko emculweni uthi uma ubhala i-Wikipedia, umhlaba wonke uqaphela okuqukethwe.
Engaziwa kubantu abaningi, i-Wikipedia, njengamabhizinisi amaningi asekelwe kuwebhu, yaqala ngengozi. UMnumzana Wales, indoda elandela lesi sayithi yayingumthengisi ongakhetha ukufuna ukuqala i-encyclopedia e-intanethi eyaziwa ngokuthi i-Nupedia.com. Ngemva kokuheha abambalwa abanikelayo, uMnumzane Wales waqala i-Wikipedia ngakwesokunene, okwakhula ngokukhululekile.
Phakathi neminyaka eyakhayo, uMnu. Wales wakhokhela izindleko ephaketheni lakhe. Namuhla, i-Wikimedia Foundation, inhlangano engenzi inzuzo esekela i-Wikipedia isebenzisa iminikelo.
Okwamanje, uMnu. Wales ugijima i-Wikipedia ngosizo lwabasebenzi abakhokhelwayo abangu-4. Ukholelwa emandleni we-technology page-editing technology, i-pre-Wikipedia. Ngo-2004, waqala i-Wikia, isiqalo esivumela abantu ukuthi bakhe amasayithi asekelwe emphakathini wesithakazelo. Isibonelo, i-Wiki 24 iyincwadi ye-encyclopedia engavumelekile ye-TV "24."
Manje, i-Wikipedia iguqukile ibe uphawu lwekhono lewebhu. Lithi okuningi ngekusasa kolwazi lwendalo. Kusho ukuthi kubantu abazayo ngeke bancike kancane ekubusweni kanye nokunye ngokubambisana, kusho uMitchell Kapor, umongameli we-Open Source Applications Foundation.